နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: အမေးအဖြေ (၃၁) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
အမေးအဖြေ (၃၁) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
၁။ Masturbation နဲ့ နှလုံးဖောက်ပြန်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်မှုရှိပါသလား။
၂။ ကျနော်နဲ့ ကျနော့် ချစ်သူ တူတူနေမိပါတယ်။
၄။ (ဂနို၊ ဆစ်ဖလစ်) ရောဂါတွေနဲ့ HIV ဆက်စပ်မှု ရှိပါသလား။
၅။ ဆီးလမ်းကြောင်းမှ ပြည်များထွက်နေတတ်လို့
၆။ ယောက်ျားလေးတွေက ကျမကိုပဲဝိုင်းကြည့်နေလို့ပါ။
၇။ I can't buy Misopristol 800 mcg
၈။ မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် Unwanted Pregnancy ကို ဖတ်ပြီးပေမယ့် မရှင်းလို့ပါ။
Tue, Feb 14, 2012 at 10:11 PM
Masturbation နဲ့ နှလုံးဖောက်ပြန်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်မှုရှိပါသလား။ ဆရာ့စာထဲမှာ မတွေ့မိလို့ မေးတာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ဟိုတလောက တစ်နေ့တည်း ၁၇ ကြိမ် masturbate လုပ်လို့ သေသွားတဲ့ဆိုတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်အကြောင်းလည်း ဖတ်ဖူးလို့။ အဲဒီသတင်းက fraud လား၊ တကယ်လားတော့မသိပါ။ ကျွန်တော် စိတ်ထင် လုပ်လို့မရလောက်ဘူးထင်တယ် ၁၇ ခါလောက်တော့။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ၄ ကြိမ်လောက်အထိပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အဲဒီသတင်းမဖတ်မိပါ။ တကယ်အဲလောက်အကြိမ်ကို ဆက်တိုက်လုပ်ရင် အားကုန်မှာသေခြာတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း Orgasm ရချိန်မှာ နှလုံးခုန်တာ များတယ်၊ မြန်တယ်။ အခံကမကောင်းသူဆိုရင် ပိုခံရမယ်။ လောကမှာ သူးများထက်ထူးသူတွေဆိုတာ နယ်ပယ်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။
Sun, Feb 12, 2012 at 11:19 AM
ကျနော်နဲ့ ကျနော့် ချစ်သူ တူတူနေမိပါတယ်။ တိတိကျကျဆိုရင်2January ကပါ။ အခု သူကိုယ်ဝန် ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့(့) မှာ နေကျပါတယ်။ ကျနော့်ချစ်သူ ရောက်တာ ၃ လလောက်ပဲရှိသေးလို့ကျနော်တို့ ကလေး မယူချင်သေးသလို အိမ်ထောင်ပြုဖို့လည်း အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါ။ ကိုယ်ဝန် ၁-၂ လလောက်ကို ဖျက်ချလို့ရနိုင်ပါသလား။ ကျနော်တို့ ဒီက မြန်မာဆေးခန်းကို သွားတော့ သူတို့က 1600$ လောက် ကုန်မယ်ပြောပါတယ်။ ငွေကြေးလည်း မတတ်နိုင်သေးပါ။ ဘယ်လိုဆေးကို ဒီမှာ ဝယ်နိုင်ပါသလဲ။
• Medical abortion (1) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၁) http://health-adult-reading.blogspot.com/2011/04/medical-abortion.html
• Medical abortion (2) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၂) http://health-adult-reading.blogspot.com/2011/12/medical-abortion-2.html
• Medical abortion (3) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၃) http://health-adult-reading.blogspot.in/2012/01/medical-abortion-3.html
ကျွန်တော် လိင်အင်္ဂါမှ ပြည်ကဲ့သို့ အရည်များ စိမ့်ထွက်နေပြီး ဆီးသွားတိုင်း နာကျင်ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဆေးဆိုင်မှာ ပြောပြီးဝယ်သောက်သော်လည်း ဆေးလေးခွက်စာ ခန့်သောက်ပြီးသော်လည်း မထူးခြားပါ။ အဲဒီ မတိုင်ခင် ၃ ရက်ခန့်က ပျော်ပါးမိခဲ့ပါတယ်။ ဘာများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ ဘာဆေးသောက်ရမလည်း ပြီးတော့ သောက်ရမယ့် ဆေးအမည်ကို ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အခုဖြေ ကြားပေးပါခင်ဗျား။
• STDs/STIs General Recommendations လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ အခြေခံဥပဒေသ
• Urethritis in Men ယောက်ျားတွေ ဆီးအောင့်ရင်
Sun, Feb 12, 2012 at 4:59 PM
အထက်ပါ ရောဂါတွေ (ဂနို၊ ဆစ်ဖလစ်) ရောဂါတွေနဲ့ HIV ဆက်စပ်မှု ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီရောဂါတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင် HIV ရှိနေပြီလို့ ယူဆလို့ ရပါပြီလား။
STD/STI လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေထဲမှာ HIV လဲပါတယ်။ HIV မဟုတ်တဲ့ တခြား STD/STI ရှိနေသူတွေမှာ HIV အမြဲတွဲရှိမနေပါ။ ဒါပေမဲ့ HIV ကူးစက်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို အားပေးတယ်။ ဖိတ်ခေါ်နေရာကျတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းပိုများတာ တွေ့ရတယ်။ HIV ရှိနေ-မနေဆိုတာ သွေးစစ်မှသာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တခြား STD/STI ရှိတိုင်းတော့ HIV မရှိပါ။
Sun, Feb 12, 2012 at 5:21 PM
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လူငယ်သဘာဝ ဖြစ်တတ်တဲ့ နည်းတူ လိင်တူဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဆီးလမ်းကြောင်းမှ ပြည်များထွက်နေတတ်လို့ ဂနို ဖြစ်တယ်ထင်လို့ Doxycycline 100 mg တစ်ရက်ကို တစ်ခါသောက် တစ်ပြားနှုန်းနဲ့ နှစ်ကြိမ်သောက်ခိုင်းထားပါတယ်။ အထက်ပါရောဂါဟာ Anus ကို အသုံးပြုတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုတဲ့အခါလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသလား။
• Gonorrhea ဂနိုရောဂါ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၁၇)
Mon, Feb 13, 2012 at 3:38 PM
ကျမဖင်က အတော်လေး ကော်ပြီး ကြီးနေလို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလည်း။ ကျမ အပြင်ထွက်သွားလည် ရှက်မိပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက ကျမကိုပဲဝိုင်းကြည့်နေမိလို့ပါ။
စိတ်တော့ မညစ်ပါနဲ့။ မိမွေးတိုင်းကိုပြင်ရတာ ခက်ပါတယ်။ တင်နေရာကို သေးချင်တာက ကြီးချင်တာထက်တော့ လွယ်ပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်-ဆေးရုံ ရွေးရမယ်။ တခုရှိသေးတာက အရိုးတည်ဆောက်မှုမှာ တင်ကောက်နေသူတွေက တမျိုးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၊ မြို့မှာ အဲလိုလုပ်ပေးနိုင်တာ ရှိ-မရှိစုံစမ်းရမယ်။ Plastic surgeon အလှအပတွက်ခွဲစိတ် အထူးကုဆရာဝန်ကနေသာ လုပ်မယ်။ ဆေးစစ်တာတွေလဲ လုပ်ရမယ်။ လူနာနဲ့ ဆရာဝန် ဆွေးနွေးရမယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကာယကံရှင်က ချရတယ်။ အဆီကများနေတာဆိုရင် Liposuction နည်းနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်။ လူနာလို့သာပြောရတာ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးဘဲ ယောက်ျားလေးတွေ ဝိုင်းကြည့်တာဘာဖြစ်လဲ သဘောထားနိုင်ရင် ဆက်လုပ်မှာအတွက် စိတ်အေးအေးနဲ့ စဉ်းစား-ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်။ နောက်မေးစရာရှိလာရင်၊ အသက် စတာတွေထည့်ရေးပါ။
Mon, Feb 13, 2012 at 4:02 PM
I have read your reply, but till now I can't buy Misopristol 800 mcg. And I can't hold Misopristol 200mcg (I mean other way). So I do hope you can guide another medicine instead of these.
I can write all I know. But I don't know medicine market. I don't know where you live. I was told it is difficult in Burma. I know about it only where I reside. All medicines have different trade names. Sorry!
Mon, Feb 13, 2012 at 8:25 PM
ကျွန်တော့် ကောင်မလေးက ကိုယ်ဝန် နှစ်လ ရှိတော့မယ်ဆရာ။ မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် Unwanted Pregnancy ကို ဖတ်ပြီးပေမယ့် မရှင်းလို့ပါ။ ဒုက္ခရောက်တော့မှာမို့ ဘယ်ဆေးကို ဘယ်လို သုံးရမလဲဆိုတာ အသေးစိတ် သိပါရစေ။ ဆေးသောက်ပြီးဖျက်ချချင်လို့ပါ။
ဆရာကနေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဘို့ ဆေး-နည်းလမ်း မညွှန်ပါ။ လုပ်လဲမပေးပါ။ ဆေးပညာအရသာ စုံအောင် ရေးပါတယ်။
ယမုန်နာဆေးခန်း - အမေးအဖြေ (၃၁) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)